Madaxwayne Farmaajo oo kulan xasaasi ah la yeeshay dhigiisa Turkiga Ordugan – Radio Daljir
Madaxwayne Farmaajo oo kulan xasaasi ah la yeeshay dhigiisa Turkiga Ordugan
Noofember 24, 2018 4:38 b 0
Madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo booqasho aan horay loo shaacin ku tagay wadanka Turkiga ayaa la kulmay dhigiisa Turkiga Recep Tayib Ordugan.
Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa uu ahaa mid albaabada uu u xirnaa, iyadoo uu yimid waqti ay taagantahay xiisadda Sacuudiga iyo Turkiga ee ka dhalatay dilka wariyaha Sacuudiga Jamaal Kashoggi oo dowladda Soomaaliya ay horay usoo saartay qoraalo ay ku taageerayso Sacuudiga.
War kasoo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay kulanka oo kadhacay Vahdettin Pavilion ee degmada Uskudar in diiradda lagu saaray xiriirka labada dal iyo isbadalada Geeska Afrika kasocda.
Madaxtooyada Villa Soomaaliya ayaa ku tilmaantay kulanka marti qaad aan rasmi ahayn oo wadanka Turkiga uu usoo diray madaxwayne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo booqasho ku joogay maalin kahor wadanka Talyaaniga.
Dalka Turkiga waa wadanka ugu taageerada badan ee siiya dowladda faderaalka Soomaaliy, iyadoo mashaariicyo kalle duwan uu ka fuliyay magaalada Muqdisho oo ah xarunta ay dowladda faderaalka ay ku shaqayso.
Saaka & Dunida iyo Xaawo Axmed Maxamed, Daljir Garoowe (dhegayso)